16-8-1988 Unforgettable Memory of Burma - All Things Myanmar Burmese
Previous: « Congrats! to Win Htut Tara and Shine
Next: Congrats! to Pho Thauk Kyar & Hlaing Yadanar Hsu »
Myanmar Blog » Articles, Free Burma, Knowledge Base, Notes » 16-8-1988 Unforgettable Memory of Burma
16-8-1988 Unforgettable Memory of Burma
ဒီနှစ်သင်္ကြန် မန္တလေး ALPINE မဏ္ဍပ်မှာရှိမယ်ဆိုတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး
Fire razedamajor market in Mandalay
ဟေ့!! မန်းလေး။ ညောင်ပင်ဈေး … ခင်ဗျားကို အဟောင်းတန်းဆိုပြီး ရှောင်သွားမယ်မထင်နဲ့ ကိုယ့်ကျန်းမာရေး ကိုယ်ဂရုစိုက် …>_< ဈေးချို ရုံဟောင်း ... ခင်ဗျားဘေးက မန်းမြန်မာပလာဇာရဲ့ထည်ဝါမှုက ခင်ဗျားကို မျက်စောင်းထိုးနေပြီ
Khin Hlaing and his Tattoo
” မိသားစုနာမည်၊ မွေးသက္ကရာဇ်နဲ့ ကျေးဇူးရှင်ရဲ့နာမည်ကို တက်တူးထိုးထားတဲ့ ခင်လှိုင်” လူငယ်ဘဝကတည်းက တက်တူးကို စွဲစွဲလမ်းလမ်းထိုး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ခင်လှိုင်က တက်တူးမှာလည်း သူ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူရှိပြီးမှတ်ချင်တဲ့
A boy! 22 Dec 2016 မနက် 6:06amအချိန်တွင် ၆ပေါင်နှစ်အောင်စရှိသောသားလေးကို ၀ိတိုရိယဆေးရုံ ၌ အဆင်ပြေ ချောမွေစွာ မွေးဖွားခဲ့ပါသည်…မင်္ဂလာဆောင်ချိန်မှစ၍သားလေးမွေးဖွားချိန်အထိအစစအရာရာကူညီပေးခဲ့ကြသော… ဦးဇော်ဇော်နှင့်ဇနီး…ဦးဇော်ဝင်းရှိန်နှင့်ဇနီး….. သားလေး
တံတားနီနေ့(သို့ ) မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်း။
အာဏာရှင်တို့ ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၃) ရက်နေ့ မှာ စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကိုဖုန်းမော်တို့ကိုစိုးနိုင်တို့အသက်ဆုံးရှုံးစေတဲ့ ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်း –
၁၉၈၈ ခုနှစ် မတ်လ (၁၆) ရက် နေ့မှာ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့မှုများအကြောင်း အခြားကောလိပ်နဲ့ တက္ကသိုလ်တွေကို ပျံ့နှံ့သွားခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ပင်မ) ၀င်းအတွင်းမှာ ကျောင်းသားထောင်ပေါင်းများစွာ စုရုံးကြပြီး အာဏာရှင် မဆလအစိုးရ၏ လုပ်ရပ်ကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြတယ်။
ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမရှေ့တွင် ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ကြပြီး စာရွက်စာတမ်းများ ဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်။ မွန်းလွဲ (၁) နာရီမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဒုပါမောက္ခချုပ်က ကျောင်းသားများကို စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ အာဏာပိုင်များ၏ ကိုယ်စားလှယ်ဆိုသူက ကျောင်းသားများရဲ့ လိုလားချက်ကို မေးမြန်းတဲ့အခါ ကျောင်းသားအုပ်ကြီးက “ဖက်ဆစ်အစိုးရ ဖြုတ်ချရေး .. ဒို့အရေး” လို့ သံပြိုင်ဖြေကြားခဲ့တယ်။ ဒုပါမောက္ခချုပ်လည်း ကျောင်းသားများရဲ့ စိတ်ကို နားလည်သွားပြီး တားမရတဲ့အဆုံး ကျောင်းဝင်းတွင်းက မထွက်ရင် ဘာမှ မဖြစ်စေရဘူးလို့လည်း အာမခံချက် ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
ကိုဖုန်းမော်ရဲ့ဈာပနကို ကြံတောသုဿာန်တွင် မီးသင်္ဂြိုဟ်မှာဖြစ်လို့ ကျောင်းသား ထောင်ပေါင်းများစွာက ကြံတောသုဿာန်မှာ အကြာကြီး စောင့်နေခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် မွန်းလွဲ (၁) နာရီခန့်မှာ ကိုဖုန်းမော်အလောင်းကို တာမွေသင်္ချိုင်းမှာ မဆလအာဏာပိုင်တွေက တိတ်တဆိတ် သင်္ဂြိုဟ်လိုက်ကြတယ်။ ကျောင်းသားများ အကြီးအကျယ် ပေါက်ကွဲခဲ့ကြတယ်။
ကျောင်းသားများ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းတွင်းကို ပြန်လာသောအခါ ကျောင်းဝင်းတစ်ခုလုံးကို လုံထိန်းများ ထောင်နဲ့ချီပြီး ဘရင်းကယ်ရီယာများ နဲ့ ၀ိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒုပါမောက္ခချုပ်က မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပြီး ကျောင်းဝင်းပြင်ကို မထွက်ပါက လုံခြုံပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ကာလအတွင်းမှာ ပေးဆပ်ရင်းနှီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ ဘ၀တွေနဲ့စိတ်ဓါတ်တွေကို လေးစားဂုဏ်ပြုကြရဖို့ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့တာဝန်ဖြစ်သလို၊ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ အာဏာရှင်ဆန့် ကျင်တော်လှန်ရေးကိုလည်း နောင်တော် ကျောင်းသူကျောင်းသားကြီးများရဲ့ဝိညာဉ်တွေနဲ့အတူ ဆက်လက်ဆင်နွဲရင်း အမိမြန်မာပြည်ပေါ်မှာ အာဏာရှင်စနစ်ချူပ်ငြိမ်းပျောက်ကွယ်စေဖို့စွမ်းစွမ်းတမာန် ဆောင်ရွက်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(မပျိုပျိုမေ၏ ဖေါ်ပြချက်အား အခြေခံ၍ ပြန်လည်ဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်)။
credit to : နစ်နေမန်း